Ltd. , Wuxi Weiheng ဓာတု Co. , Amin နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျတစ်ဦးဦးဆောင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။ 15 နှစျကျြောကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်ဖောက်သည်များနှင့်အလုပ်လုပ်, whamine Amin, ကြားတွင်စက်မှုသန့်ရှင်းရေး, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, ပိုးသန့်ဆေး, agrochemicals နှင့်ဆေးဝါးများကဲ့သို့စျေးကွက်ဖြတ်ပြီးအသုံးပြုကြသည်ကြောင်း quats ထဲကအလွန်ပြည့်စုံသောအစုစုရှိပါတယ်။ Whamine ယင်း၏အားသာချက်များကိုခိုင်ခံ့အပေါင်းတို့နှင့်၎င်း၏ဖောက်သည်များအတွက်တန်ဖိုးကိုဖန်တီးရန်၎င်း၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုဆက်လက်မည်အကြောင်း, ကျက်စားထားတဲ့ ပို. ပို. လေးစားခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရအမည်ဖြင့်ဖြစ်လာရန်။
surfactant ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ Trend
surfactant ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်ချက်အောက်ပါအချက်များကိုအတွက်သရုပ်ပြပါလိမ့်မည်: 1. ကြောင့်သဘာဝအဖြစ်မှလှည့်; 2. အဲဒါကိုထားရန်ဆေးကြောပါလိမ့်မည် 3. , အန္တရာယ်ရှိသောဓာတုပစ္စည်းကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ် ...
Antistatic Effect - စုံလုံ surfactant ၏ Functions များ
soft နှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့အောင်ပု surfactant မော်လီကျူးထည်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ aligned နေကြပါတယ်သောအခါ, ထည်၏ငြိမ်ပွတ်တိုက်၏ဆွေမျိုးကိန်းလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော linear alkyl polyoxyethylene အီ, linear alkyl ဖက်တီးအက်ဆစ် polyoxyethylene အီနှင့်အမျိုးမျိုးသောစုံလုံ surfactant အဖြစ် non-ionic surfactant အပေါငျးတို့သငြိမ် frict လျှော့ချ ...
Solubilization - စုံလုံ surfactant ၏ Functions များ
Solubilization Solubilization ရေ၌ညံ့ဖျင်းတွင်ပျော်ဝင်နေသောသို့မဟုတ်ပျော်ပစ္စည်းများ၏နိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်အပေါ် surfactant ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရေထဲမှာ benzene ၏နိုင်မှု 0.09% (အသံအတိုးအကျယ်အစိတ်အပိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာဆိုဒီယမ် oleate ကဲ့သို့) တစ်ဦး surfactant ဆက်ပြောသည်လျှင် benzene ၏နိုင်မှုကို 10% အထိတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။ Solubilizat ...
Xiangtou ကျေးရွာ, Yicheng မြို့, Yixing စီးတီး, Jiangsu, တရုတ်
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Featured ထုတ်ကုန်များ , မြေပုံအညွှန်း , မိုဘိုင်းဆိုက်ကို
Phenylethanolamine-N ကို-Methyltransferase , Anti-တည်ငြိမ်သောကိုယ်စားလှယ် , Octylamine , intermediate ,